आईतवार, जेष्ठ १८, २०७७
Sun, May 31, 2020 at 7:05am
बूढानीलकण्ठका दुई जनाले जिते कोरोना #आहा खबर# किट अभाव भएपछी परीक्षणबिनै झुलाघाट नाकाबाट भित्रिए १ हजार नेपाली #आहा खबर# बागलुङमा सुरू भयाे क्वारेन्टिनमै योग प्रशिक्षण #आहा खबर# निशान छाप परिवर्तन गर्ने संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश #आहा खबर# आज संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुने #आहा खबर# बहिनीलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगाउन अक्षयले गरे पूरा फ्लाइट बुक #आहा खबर# कोरोनामुक्त भयो भक्तपुर जिल्ला: निको भए चारैजना संक्रमित #आहा खबर# संविधान संशोधनमा सरकारलाई सहयाेग गर्ने कांग्रेसको निर्णय #आहा खबर# परीक्षण र उपचार समयमै नपाउँदा क्वारेन्टाइनमै युवकको मृत्यु #आहा खबर# क्वारेन्टाइनमा राखिएका एक बालकको मृत्यु #आहा खबर# कोरोनाका कारण विश्वभर १ सय २८ नेपालीको मृत्यु #आहा खबर# आजकाे माैसम: पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावले बिभिन्न स्थानमा वर्षा #आहा खबर# कोरोनाभाइरसकाे भ्याक्सिन यहि वर्षको अन्त्यसम्म बजारमा आउने चीनकाे दाबी #आहा खबर# हत्या आरोपमा सुनसरीका २ जना पक्राउ #आहा खबर# नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो #आहा खबर#
इलाममा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न 'रिफ्लेक्टर स्टिकर'
आईतवार, माघ ७, २०७४ साल
इलाम, ७ माघ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्याक्टरमा ‘रिफ्लेक्टर स्टिकर’ टाँस्न थालेको छ । हुस्सु र कुहिरोका कारण राजमार्गमा सवारी साधन एकआपसमा नदेखिएर एक्कासि ठोक्किने स्थिति आउन नदिन ट्राफिकले ट्याक्टरमा रिफ्लेक्टर स्टिकर टाँस्न थालेको हो । ट्राफिकले एक साताको बीचमा तीनसय भन्दा बढी ट्याक्टरमा रिफ्लेक्टर टाँसिसकेको ट्राफिक इञ्चार्ज पदमबहादुर राईले जानकारी दिए । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार चिसो मौसममा हुने अधिकांश..
नारायणगढ मुग्लिन सडक माघ १३ देखि दिउँसो ६ घण्टा बन्द गरिने
शुक्रबार, माघ ५, २०७४ साल
चितवन, माघ ५ । निर्माणाधीन नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड माघ १३ गतेदेखि दिउँसोमा पनि बन्द गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको ठेकेदारका प्रतिनिधि, आयोजनाका अधिकारीसहितको बैठकले माघ १३ देखि विहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले सो सडकखण्ड राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म बन्द गरिएको छ । रातिमा सडक बन्द गर्दा धेरै काम..
दुइ वर्षभित्र सक्ने गरि थालिएको थामखर्क विमानस्थल कालोपत्र सुस्त गतिमा
बिहिवार, माघ ४, २०७४ साल
खोटाङ, ४ माघ (रासस) । दुई वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कालोपत्र थालिएको थामखर्क विमानस्थलको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । विमानस्थल कालोपत्रको अहिलेसम्म ३५ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको निर्माणस्थलमा खटिनुभएका फिल्ड सुपरभाइजर दानबहादुर श्रेष्ठले बताए । उडान शुरु गरेको १८ वर्षसम्म कालोपत्र हुन सकेको थिएन । थामखर्क विमानस्थलमा रौता कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २०७३ माघदेखि कालोपत्र शुरु गरेको हो भने २०७५ असार मसान्तसम्म सम्पन्न..
विवादका कारण धनगढी क्षेत्रमा निर्माणधीन ‘छ लेन’ सडक निर्माण रोकियो
बुधबार, माघ ३, २०७४ साल
धनगढी, ३ माघ (रासस)। सडक क्षेत्रभित्र बनाइएका घरलगायतका संरचना भत्काउने विषयमा उत्पन्न विवादपछि धनगढी क्षेत्रमा निर्माणधीन ‘छ लेन’ सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । विवादकाबीच तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर बनाइएका संरचना मुआब्जाविना हटाउन नपाइने मागसहित ट्राफिक चौराहाका घना जोशीलगायत १३ जना घर धनीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि सो क्षेत्रको सडक निर्माणको काम रोकिएको मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडक..
झापाको दमकदेखि पाँचथरको रवि सम्म गरियो सडक मार्ग खुला
मंगलवार, माघ २, २०७४ साल
दमक, २ माघ । झापाको दमकबाट इलाम हुँदै पाँचथर जोड्ने दमक–रवि चिसापानी सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) को सम्पूर्ण भाग खुलेको छ । दुई दशकअघिदेखि निर्माणाधीन ४१ किमी सडकको सबै भाग खुलेको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष गगन पुरीका अनुसार एक सातापछि साना सवारी साधन गुडाउन दिइने निर्णय भएको छ । यस अगाडि रतुवा खोलाको किनारै किनार सवारी साधन सञ्चालन हुँदै आएका थिए..
२६ वर्षपछि बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालन हुँदै, चैतको पहिलो सातादेखि नियमित उडान
सोमबार, माघ १, २०७४ साल
बागलुङ, १ माघ : बन्द भएको २६ वर्षपछि बागलुङ नगरपालिका–१४ स्थित बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमान कम्पनी र बागलुङ नगरपालिकाका पदाधिकारीबीच आउँदो चैत पहिलो सातादेखि नियमित उडान शुरु गर्ने सहमति भएको हो । प्राधिकरणका पदाधिकारी, विमान कम्पनीका सञ्चालक, बागलुङ नगरपालिकाका प्रतिनिधि, पूर्वसासंदलगायत सरोकारवाला पक्षबीच आइतबार भएको छलफलमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको हो । सहमतिअनुसार पहिलो..
जनताको तीव्र आशै आशा बीच, हुँदै बेनी–जोमसोम सडकखण्ड पिच
आईतवार, पौष ३०, २०७४ साल
बाबियाचौर, म्याग्दी, ३० पुस । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ७६ किमीको बेनी–जोमसोम सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । चार नं प्रदेशको जीवनरेखा कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले कालोपत्रे गर्ने तयारी भएको जनाएको छ । आयोजनाका इञ्जिनीयर प्रदीप निरौलाले कालोपत्रे गर्न पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्ररुपमा अघि बढेको जानकारी दिए । बेनी–घाँसा खण्डमा डिबीएसडी र घाँसा–जोमसोम खण्डमा असपाल्ट..
पाल्पा–बुटबल सडकखण्ड अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा ढुङ्गा खस्दा सडक अवरुद्ध
शनिबार, पौष २९, २०७४ साल
पाल्पा, २९ पुस (रासस) : सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–बुटबल सडकखण्ड अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा ढुङ्गा खस्दा सडक अबरुद्ध भएको छ । सडकमाथिबाट ढुङ्गा खसेर पाल्पा–बुटबल सडक अवरुद्ध हुँदा सयौँ यात्रु अलपत्र परेका छन् । बुटबलदेखि पाल्पा हुर्दै स्याङ्जा, पोखरा, गुल्मी तथा बागलुङतर्फ जाने सवारीसाधन अहिले बीच बाटोमा रोकिएका छन् । अपराह्न ३ बजे तिनाउ गाउँपालिका–३, दोभानको नजिकै तल्लो सिद्धबाबा सडकमा ढुङ्गा खस्दा यातायातका साधन सञ्चालनमा..
पुरा हुँदै जनताको रहर, बनेपछि कलंकी–कोटेश्वर सडकखण्डले सहज सहर
शुक्रबार, पौष २८, २०७४ साल
ललितपुर, २८ पुस । तपाई कलंकीको जाममा कतिपटक पर्नुभएको छ ? एक दुई वा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ । यदि तपार्इं काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ भने दशौँपटकसम्म पनि जाममा पर्नुभएको हुनसक्छ । तर अब भने त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनु हुने भएको छ । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा नेपालमा पहिलो पटक आठ लेन सडक कोटेश्वर–कलंकी–चक्रपथ विस्तारको काम भइरहेको छ । छ महिनामा नै..
चालक पक्राउको विरोधमा पोखराका बस व्यवसायी आन्दोलित
काठमाडौं, पौष २७ । पोखराका ट्याक्सी व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कास्कीका ८ वटै बस व्यवसायीले आज बस सन्चालन नगर्दा सर्वसाधारण यात्रु मारमा परेका छन् । मिटरमा ट्याक्सी नचलाएको भन्दै प्रहरीले १८ जना ट्याक्सी चलाकलाई पक्राउ गरेपछि पोखराका ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । हिजो मात्रै उनीहरुले पृथ्बीचोकमा ट्याक्सी जाम गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ट्याक्सी व्यवसायीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै जिल्लाका सबै..
नेपाल एयरलाइन्सको सेवा खस्कियो, उडान भर्ने र यात्रु बोक्ने दुवै सूचीमा दोस्रो स्थानमा
बिहिवार, पौष २७, २०७४ साल
काठमाडौं, पौष २४ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा खस्किएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान भर्ने र यात्रुलाई सेवा दिनेमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमको सेवा खस्किएको हो । दुईवटा बोइङमध्ये एउटा लिलामी र अर्काे मर्मतका लागि एक महिनासम्म सिंगापुरको एसटी एरोस्पेस टेक्नोलोजीमा राख्नु परेपछि निगमको उडान ठूलो संख्यामा कटौती भएको थियो । सोही कारण निगमको सेवा खस्किएको हो । सन् २०१५ को..
चिसोले जनजीवन प्रभावित, भरतपुर–काठमाडौँ र पोखरा उडान रद्ध
आईतवार, पौष २३, २०७४ साल
रत्ननगर, चितवन, २३ पुस : एक सातादेखि बढेको चिसोका कारण चितवनलगायत आसपास क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । चिसो र बाक्लो हुस्सुले मौसम प्रतिकूल हुँदा स्थानीयवासी ठाउँठाउँमा आगो तापेर जाडो छल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । शनिबार जिल्लाबाट काठमाडौँ र पोखराको उडानसमेत रद्ध गरिएको भरतपुर विमानस्थलका प्रमुख पवनकुमार गौतमले जानकारी दिए । अहिले १२ बजेसम्म कुनै पनि उडान हुन सकेको छैन । भरतपुर विमानस्थलका..
बल्ल पुरा भयो गाउँलेको रहर जब पुग्यो मनाङको तिल्चेमा पहिलो मोटर
शुक्रबार, पौष २१, २०७४ साल
मनाङ, २० पुस । मनास्लु क्षेत्रभित्र पर्ने पर्यटकीय तिल्चे गाउँमा मोटर पुगेको छ । जहाँ पहिला पहिलाका बूढापाका भोटको नून कारोबार गर्न जाने गर्थे । मनाङलाई मोटर बाटोले छोए पनि यस गाउँमा भने मोटर पुगेको थिएन । मस्याङ्दी नदीको पारिपट्टिको यस गाउँ वरीबाट मोटर गुड्दा टुलुटुलु हेरेर बसेको अवस्थामा गतवर्षबाट मोटरेबल पुल बनेपछि गाउँलेको पहल र सडक डिभिजन दमौलीको सहयोगमा गाउँसम्म बाटो..
चितवनमा ‘महिनामा एकदिन ट्राफिक व्यवस्थापनलाई’ अभियान संचालन
बुधबार, पौष १९, २०७४ साल
रत्ननगर, १९ पुस । चालक होस् या बटुवा, बढी दुर्घटना दुबै पक्षको लापरबाहीका कारण हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएकाले चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले समुदायसँग मिलेर ट्राफिक व्यवस्थापन शुरु गरेको छ । समुदायसँग मिलेर ‘महिनामा एक दिन ट्राफिक व्यवस्थापनलाई’ भन्ने अभियान थालिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तले जानकारी दिए । समुदायलाई दैनिकरुपमा सहभागी गराउन पाए सचेतना बढ्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले..
काठमाडौंमा माइक्रो र टेम्पो विस्थापन हुँदै, छिट्टै ठूला बस सञ्चालन
सोमबार, पौष १७, २०७४ साल
१७ पुस, काठमाडौं । सधैंको ट्राफिक जाम र अव्यवस्थित सडक यातायातको मारबाट गुज्रिन बाध्य राजधानी समेत रहेको काठमाडौं उपत्यकामा अब केही सुधार आउने संकेत देखिएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गएको यात्रु चाप र भिडभाडकाबीच अहिले आएर माइक्रो बस र टेम्पोको सट्टा ठूला बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले माइक्रो बस र टेम्पो जस्ता सार्वजनिक यातायातका साना सवारी साधनहरुलाई..
जोड्दै सारा नेपाललाई :म्याग्दीमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य तीव्र
म्याग्दी, १७ पुस । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग र बाँदुक गाउँ जोड्ने निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुल निर्माणले तीव्र गति लिएको छ । तीन वर्ष अगाडि शिलान्यास गरिएको ३६५ दशमलव ८० मिटर लामो झोलुङ्गे पुल नेपालकै लामो हुने भएको छ । पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला समन्वय समितिका झोलुङ्गे पुल सम्पर्क व्यक्तिसमेत रहेका असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर बालकृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो पुलसम्पन्न..
पर्यटकीय महत्वको भैरहवा–तौलिहवा सडक स्तरोन्नतिको काम शुरु
लुम्बिनी, १७ पुस । अबको दुई वर्षपछि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म पुग्न पर्यटकले धुलो खानु पर्ने छैन, न त जाममा नै फस्नु पर्नेछ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार सिद्धार्थनगर तथा बुद्धभूमि कपिलवस्तु तौलिहवाबाट लुम्बिनीसम्म आउने बाटो फराकिलो हुने भएपछि लुम्बिनी पुग्न सहज हुने भएको हो । भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै तौलिहवासम्मको सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम शुरु भएको छ । भैरहवा–तौलिहवा सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य तीव्र..
दाङको टरीगाउँमा यही पुस २३ गतेदेखि हवाई उडान शुरु हुँदै
शुक्रबार, पौष १४, २०७४ साल
दाङ, १४ पुस : चुनावी एजेण्डा बनेको यहाँको हवाई सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था होस् वा उद्योगी–व्यवसायी, सबैको चुनावी एजेण्डामा पर्ने गरेको टरिगाउँ विमानस्थलमा फेरि हप्तामा दुई पटक निजी विमान कम्पनीको सहकार्यमा पुस २३ गतेदेखि हवाई उडान हुने भएको छ । विसं २०१६ मा निर्माण भएको विमानस्थल यहाँका राजनीतिक दलको दबाबमा धावनमार्ग कालोपत्र भएसँगै तुलसीपुर उद्योग..
दुर्गमका आयोजनामा बैंकबाट ऋण लिएरै 'हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी'
बिहिवार, पौष १३, २०७४ साल
बाबियाचौर, म्याग्दी, १३ पुुस । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखमा निर्माणाधीन घोस्तेखोर लघुजलविद्युत् परियोजनाको सामान हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको छ । सडकमार्ग भएर शिख पुर्याइएको तार, जेनेरेटर, टवाईनलगायतका उपकरण र सामान बुधबार सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरबाट निर्माण स्थलमा पुर्याइएको हो । आयोजनास्थलमा सडक नपुगेको, मानिसले बोकेर लैजान धेरै समय, जनशक्ति र खर्च लाग्ने भएकाले सामान ढुवानीमा हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताए । शिख मावि..
लमजुङ-मनाङ मार्ग :ज्यान हत्केलामा राखेर गरिने हिमाल पारिको यात्रा
मंगलवार, पौष ११, २०७४ साल
मनाङ, ११ पुस । माथि हेर्दा आकाशै छोएझैँ लाग्ने अग्लो चट्टाने पहरा, तल हेर्दा आङै सिरिँङ्ग हुने छङ्गाछुर भिर अनि मसिनो धागोजस्तै देखिने नालबेली बगेको निलो मर्स्यांदी नदी । यो हो मर्स्यांदी नदीको किनारै किनार बेँसीशहरदेखि हिमालपारिको जिल्ला मनाङ पुग्ने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण सडक । सोही सडकमा दैनिक सयौँ यात्रु ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्छन् । लमजुङ सदरमुकाम बेँसीशहरदेखि मनाङसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति हुन नसक्दा..
ट्विनअटर विस्थापन गर्ने योजनामा नेपाल वायुसेवा निगम
सोमबार, पौष १०, २०७४ साल
काठमाडौं, १० पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले ‘ट्विनअटर’ जहाज पूर्णरूपमा विस्थापन गर्ने भएको छ । चार दशकभन्दा पहिलादेखि उडान भर्दै आइरहेका ट्विनअटर अब भने विस्थापन हुने क्रममा छन् । निगमले २०२८ सालमा पहिलो पटक ट्विनअटर ल्याएको थियो । अहिले नेवानीसँग तीन वटा ट्विनअटर छन् जसमध्ये अहिले एउटाले मात्र उडान भरिरहेको छ । अरु दुईवटा मर्मतको पर्खाइमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यसै थन्किएको अवस्थामा..
गल्छी–मैलुङ सडक निर्माण : एक वर्षमा बल्ल दश प्रतिशत काम सम्पन्न
आईतवार, पौष ९, २०७४ साल
नुवाकोट, ९ पुस । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विस्तार भइरहेको बहुचर्चित ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक योजनाको काम एक वर्षमा १० प्रतिशत मात्र निर्माण भएको छ । एक्काइस महिनाभित्र पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि काम शुरु भएको एक वर्षमा १० प्रतिशत विस्तार एवं स्तरोन्नति भएको हो । पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीदेखि शुरु भएर देवीघाट–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोडिने सडक ८२ किमी लम्बाइको छ । सडक निर्माणअन्तर्गत ठेकेदार..
फलेवास नगरपालिकाद्वारा सडक आसपास संरचना निर्माणमा रोक
फलेवास पर्वत, ९ पुस । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सबै सडकको मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले व्यवस्थित नगर बनाउने अभियानअनुरुप दुई हप्ताभित्र मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो । सडक मापदण्ड तयार नभएसम्म संरचना निर्माण कार्यसमेत रोक लगाइएको छ । फलेवास नगरोन्मुख क्षेत्र भएकाले नयाँ बस्ती विकास गर्न पनि सडकको मापदण्ड तोक्न लागिएको कार्यकारी अधिकृत मोतीराम सापकोटाले जानकारी दिए । नगरपालिकाले..
गाईघाट-दिक्तेल सिधै यातायात सञ्चालन, सुनकोशीमा बेलिबृज जडान
गाईघाट, उदयपुर, ९ पुस : सगरमाथाको गाईघाट दिक्तेल सडक मार्गअन्तर्गत उदयपुर र खोटाङ जिल्लाको बीचमा फोक्सिङटारस्थित सुनकोशी नदीमा बेलिबृज जडान कार्य सम्पन्न भएपछि शनिबारदेखि उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटबाट खोटाङको दिक्तेलसम्म सिधै यातायात सेवा सञ्चालन भएको छ । सुनकोशी नदीमा १५ दिन अघिदेखि जडान कार्य शुरु गरिएको बेलिबृज शनिबार बिहान सम्पन्न भएपछि गाईघाट दिक्तेल सडकखण्डमा यातायातका साधन सञ्चालन शुरु भएको गाईघाट दिक्तेल सडक कार्यालय..
निकुञ्जका जनावरलाई अवरोध नहुने गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सुझाव
मंगलवार, पौष ४, २०७४ साल
वीरगञ्ज, ४ पुस । निकुञ्जभित्र रहेका जनावरलाई आवतजावत गर्ने मार्गलाई ध्यानमा राखी निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माण गर्न पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले नेपाली सेनालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्कने हात्ती, गैँडा, बाघलगायतका जनावर बकैया नागमणि सामुदायिक वन क्षेत्रको बाटो भएर आवतजावत गर्ने भएकाले द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण गर्दा करिब एक किमीसम्म हाइब्रिज वे बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभक्त आचार्यले..
तेह्र वर्षपछि पाल्पाको गाउँमा रिंगरोडसहितको सडक सञ्जाल
रामपुर, पाल्पा, ४ पुस । निर्माण कार्य शुरु गरिएको १३ वर्षपछि रिङरोडसहितको सडक सञ्जाल गाउँमा जोडिएको छ । रामपुर आर्यभञ्ज्याङ सडकखण्डअन्तर्गत साविक गल्धाको बेलडाँडाबाट मित्याल, झिरुवास, सहलकोट हुँदै गाँडाकोट, भलायटार, गण्डकीढिक हुँदै रामपुरको बेझाँड बजारसँग जोड्ने रिंगरोड अवधारणासहित शुरुवात भएको सडकले अहिले गाउँ गाउँ जोडिएको हो । तत्कालीन समयमा गाँडाकोटको भलायटार र गल्धाको बेलडाँडादेखि मित्याल रुक्से भञ्ज्याङसम्म जसोतसो सडक पुगे पनि अन्य स्थानमा..
उपत्यकाका अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टरहरू अवैधानिक
सोमबार, पौष ३, २०७४ साल
काठमाडौं, ३ पुस । ड्राईभिङ सिप सिकाउने उद्देश्यले खोलिएका उपत्यकाका अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टरहरू अवैधानिक पाइएको छ । ड्राइभिङ सेन्टरहरूले बिना दर्ता र सञ्चालन अनुमति नै कारोबार गरिरहेको भेटिएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आइतवार एकैदिन पाँच वटा यस्ता ड्राइभिङ सेन्टर बन्द गरेको छ । विभागले आठ वटा ड्राइभिङ सेन्टर अनुगमन गरी पाँच वटामा सिल गरेको हो । सम्बन्धित निकायमा..
समुदायको लगानीमा ताप्लेजुङको गाउँमा पुग्यो कच्ची सडक
ताप्लेजुङ, ३ पुस । केही दिनअघि जिल्लाको सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहेलेमा जन्ती बोकेर पहिलो पटक पिकअप गाडी पुग्यो । गाडीको हर्न बजेको सुनेर सबै गाउँले दगुर्दै सडकमा भेला भए । गाडी रोकिएपछि कोहीले ढोग्न थाले त कोहीले एकआपसमा भलाकुसारी गर्न थाले । स्थानीय चन्द्रीमाया बुढाथोकीले पिकअपलाई ढोग्दै भनिन्, “अब नाम्लोमा नून र चामलका बोरा बोक्नुपर्ने दिन गए, हिँड्न पनि नपर्ने भयो ।” उक्त..
चैतदेखि मुलुकभर २० वर्ष पुरानो गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी
आईतवार, पौष २, २०७४ साल
काठमाडौ २ पौष । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी चैतदेखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई देशैभरि गुड्न नदिने गरि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाबाट हटाइएका पुराना सवारी साधन अहिले उपत्यकाबाहिरका विभिन्न ग्रामीण रुटमा सन्चालनमा छन् । यसले ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारीमा दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको भन्दै विभागले यस्तो कदम चलाएको हो । इलेक्ट्रिक र ग्यास टेम्पो तथा माइक्रो बसको हकमा भने..
जाजरकोटमा आठ वर्षसम्म मार्ग खोल्ने कार्यसमेत पूरा हुन सकेन
जाजरकोट, २ पुस । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोटखण्डको निर्माण शुरु भएकोे आठ वर्ष बिते पनि अझैसम्म काम पूरा हुन सकेको छैन । लोकमार्गको जाजरकोटखण्डको ८२ किमीमध्ये पाँच किमी सडक मार्ग खोल्न अझै बाँकी छ । थलहबजारस्थित छेडागार खोलामा पुल निर्माण नहुँदा लोकमार्ग अधुरो बनेको हो । रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको सुयाँडासम्मको जाजरकोट खण्डमा छेडागारलगायत खोला तथा खोल्सामा पुल निर्माण नगरिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । थलबजारमा पुल..
Results 1263: You are at page 42 of 43
First Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Next Last
बूढानीलकण्ठका दुई जनाले जिते कोरोना